Vaovao - Miezaha manangana sakana fiarovana ho an'ny fahasalaman'ny besinimaro
Tsindrio ny telefaona finday handraisana fotoana mivantana amin'ny fotoana fitsapana ny asidra niokrika, ny fandoavam-bola amin'ny Internet, ny santionany eo an-toerana, ny valin'ny fangatahana finday taorian'ny zava-misy… Tamin'ny tapaky ny volana novambra, Shanghai “Fisoratana anarana momba ny asidra nokleika fahasalamana Cloud Version 2.0 ″ Dia natomboka mba hanompoana ny toekarena amin'ny fomba marani-tsaina kokoa, mahomby ary azo zahana. Ny fanasitranana ara-tsosialy dia nanamafy ny tsipika fisorohana ny valanaretina an-tanàn-dehibe.
Ny areti-mandringana satro-boninahitra vaovao ary "mihazakazaka" manohitra ny virus. Andian-asa vaovao tsy mbola nisy toa azy dia hihazakazaka tsikelikely amin'ny taona 2020. Ny batisan'ny ady "valan'aretina" dia nampahatsiahy lalina ny olona ihany koa fa ny rafi-pahasalamam-bahoaka dia ampahany lehibe amin'ny fiantohana ny fahasalaman'ny olona rehetra.
Taona manokana, asa manokana! Ny fivoriana faha-10 tamin'ny faha-10 taonan'ny Komity an'ny antoko munisipolo iraika ambin'ny folo izay natao andro vitsy lasa izay dia nanantitrantitra ny tokony hanaovana asa mafy amin'ny famaranana ny drafitra dimy taona faha-13 sy ny fanombohan'ny drafitra dimy taona faha-14. Manoloana ny toe-javatra misy ny valanaretina ankehitriny, dia hitandrina hatrany ny ambaratonga ambony isika, ny fiambenana, ny valiny siantifika, ny valiny saro-pady ary ny fampiharana politika mazava tsara, hanamafisana hatrany ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina voajanahary ary ny fahaiza-mamaly vonjy maika, ary hanao asa mafy orina amin'ny "Fidirana amin'ny fiarovana ivelany sy ny fiverenan'ny fiarovana anatiny".
Drafitra vaovao no voasoratra, ary manomboka ny dia vaovao. Ny rafitra ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana any Shanghai dia miantsoroka ny iraka ampanaovina azy ary miezaka mafy manangana sakana amin'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny fahendrena amin'ny fahalalana, ny fomba hamaliana ary ny fahasahiana mitady ny fanovana, hananganana tsipika fiarovana mafy ho an'ny vahoaka fiainana, ary hanoratra vanim-potoana vaovao “tanàna, manatsara ny fiainana Toko vaovao amin'ny“ tsara tarehy ”.
Ampitomboy ny mijery mialoha ary manangana rafitra fahasalamana ho an'ny daholobe feno kokoa
Ny 1 Novambra lasa teo dia nanjary manan-kery ny "Fitsipika momba ny Kaomina Shanghai momba ny fitantanana vonjy taitra ho an'ny fahasalamam-bahoaka". Manomboka amin'ny fanaraha-maso sy ny fampitandremana mialoha ny valin'ny vonjy taitra, ny traikefa mahomby taloha dia nanjary lasa toko 10 sy lahatsoratra 85. Mametraka rafi-pitantanana vonjy taitra ho an'ny fahasalamam-bahoaka "fisorohana aloha, fitambarana fandriampahalemana ary ady", Shanghai, tanàn-dehibe mega, dia manangana andalana fiarovan-tena henjana sy mafy orina kokoa. Io ihany koa ny lalàna mifehy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny areti-mandringana amin'ny faritra faritany.
Ny fisorohana ny valanaretina any Dacheng dia mitaky valiny haingana sy marina ary koa ny fanohanan'ny andrim-panjakana. Raha niverina ny fotoana tamin'ny 20 Janoary 2020, nitatitra ny tranga voalohany voamarina fa voan'ny pnemonia avonavona vaovao i Shanghai; tamin'ny 24 Janoary, ny alin'ny Taom-baovao, nanangana fomba fiasa voalohany i Shanghai amin'ny tranga tampoka amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fipoahan'ny ady "valan'aretina" dia nahatonga ny fiovan'ny rafitra lalina. Ny 7 aprily lasa teo dia nanao valan-dresaka ho an'ny fahasalamana ho an'ny daholobe i Shanghai ary namoaka ny «Hevitra maro momba ny fanatsarana ny rafitra fisorohana sy fifehezana ireo epidemika lehibe sy fanatsarana ny rafitra fitantanana vonjy taitra ho an'ny fahasalamam-bahoaka» (antsoina hoe "Shanghai 20 Fananganana Fahasalamam-bahoaka"). Nanambara mazava ny fihaonana: amin'ny taona 2025 i Shanghai dia ho lasa iray amin'ireo tanàna matanjaka indrindra amin'ny rafi-pahasalamam-bahoaka manerantany.
"Miady am-pahavitrihana ity valanaretina ity izahay, ary koa mankasitraka sy mampiroborobo ny fanavaozana ny ankapobeny sy ny fanavaozana ny rafi-pahasalamam-bahoaka an-tanàn-dehibe, ary miezaka manaparitaka ny lalan'ny fitantanana fiarovana ara-pahasalamam-bahoaka." Profesora Luo Li, sekreteran'ny antoko Sekolin'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny Oniversiten'i Fudan, dia nilaza tamin'ny mpanao gazety. Ny "lojika" ao ambadiky ny fananganana ny rafitra manokana momba ny fitantanana ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka any amin'ireo tanàn-dehibe mega dia mitoetra ao: Voalohany indrindra, ny fanamafisana ny fisorohana dia ny fahatanterahana fampitandremana mialoha miaraka amin'ny fifehezana aretina feno sy mora tohina kokoa ary ny rafi-pahasalamam-bahoaka. Faharoa, ny fikatsahana ny "zava-mitranga aotra" dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Noho izany, rehefa miseho ny tranga sporadika, ny fomba famonoana ny "lelafo" amin'ny hafainganam-pandeha haingana indrindra ary amin'ny farafahakeliny vidiny sy fitazonana ny fiasan'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena ara-dalàna no tokony harahin'ity rafitra ity.
"Raha ny fomba fijery ankehitriny, ny fisorohana sy fanaraha-maso marina ary fanariana haingana ireo tranga sporadika tato ho ato dia efa naneho ny fahombiazan'ny fanatsarana sy ny fananganana fahasalamam-bahoaka an-tanàn-dehibe." Luo Li dia nilaza fa amin'ny ady amin'ny valanaretina pnemonia miandoha dia manana orinasa 117 manerana ny tanàna i Shanghai. Ny tobim-pahasalamana tazo sy ny tobim-piarahamonina sentinel miisa 200 an'ny vondrom-piarahamonina dia nitana andraikitra lehibe "poste post". Manantena ny ho avy, hanangana «rindrina varahina sy vy» ho fisorohana sy hifehezana ny valanaretina eto an-tanàna, manomboka amin'ny fanavaozana ny rafi-pahasalamam-bahoaka ka hatramin'ny fananganana rafi-pifehezana sy talenta toy ny aretina, aretin'ny taovam-pisefoana ary fitsaboana lehibe. dia ho asa maharitra, izay mitaky fikirizana. Mba hanatanterahana izany dia ilaina ny fanamafisana ny firafitra mijery mialoha sy ny famolavolana drafitra, ary ny mahatakatra ny fandraisana an-tanana ny asa.
Mifanaraka amin'izay ilain'ny olona ary manafaingana ny fanovana ny “Hopitaly Digital Digital”
Ny fivoriana plenary dia nanasongadina fa tokony hampiroborobo tanteraka ny fanovana nomerika ny tanàna isika. Ny fanovana dizitaly ny tanàna dia lohahevitra vaovao, injenieran'ny rafitra, mandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny famokarana an-tanàn-dehibe, fiainana ary ekolojia, ao anatin'izany ny digitalisation économisation, ny nomerika momba ny fiainana, ary ny digitalisie an'ny fitondrana.
Ny fanafainganana ny fanovana nomerika sy ny fananganana hopitaly "marani-tsaina" no tadiavin'ny vahoaka ankehitriny. Araka ny antontan'isa farany, hopitaly Internet 43 any Shanghai no nandefa serivisy fitiliana sy fitsaboana amin'ny Internet, ary ny "Internet + Nursing Services" dia mbola andramana hatrany amin'ny distrika 4 ao anatin'izany Changning, Jing'an, Putuo, ary Pudong.
Tao amin'ny Hopitaly Distrikan'i Xuhui Central, hatramin'ny nanjary hopitalim-panjakana voalohany tao Shanghai nahazo fahazoan-dàlana hôpitaly Internet tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity, ny fifampidinihana amin'ny dokotera an-tserasera, ny fizahana fanaraha-maso “rahona”, ny fandoavam-bola amin'ny Internet sy ny fandefasana fanafody any an-trano. efa tanteraka tamin'ity hopitaly ity. Hatramin'ny 27 Novambra, ny "Hopitaly Xuhuiyun" dia nahazo dokotera mihoatra ny 35000 ary namoaka fanafody 6 557. Ny "mahita dokotera ao an-trano nefa tsy miala ao an-trano" dia lasa fomba fanao isan'andro ho an'ny olona maro kokoa.
“Noho ny fanohanan'ny andiana politika, nahitana fivoarana mazava ny Hopitaly Xuhuiyun. Amin'izao fotoana izao, 400-500 ny salanisan'ny fakan-kevitra amin'ny Internet isan'andro, ary ny kalitaon'ny fakan-kevitra dia nanao dingana avo lenta ihany koa: vitsy an'isa ny fakan-kevitra momba ny fahasalamana tsotra, ary ny fangatahana serivisy ara-pahasalamana no be mpampiasa. Raha fintinina, ny zavatra ataonay dia ny 'filàna ara-pahasalamana' ho an'ny sarambabem-bahoaka ary mamaha andiana olana azo ampiharina. ” hoy i Zhu Fu, talen'ny fanatanterahana ny hopitaly foiben'ny distrikan'i Xuhui.
Ny fampiroboroboana sy ny fampiharana ny angon-drakitra momba ny fitsaboana dia efa tafiditra ao amin'ny fiainan'ny olom-pirenenan'i Shanghai. Taorian'ny firongatry ny valan'aretina, ny "kaody miaraka amin'ny fampiharana" dia lasa "fanamboarana mahazatra" hizoran'ny olom-pirenenan'i Shanghai, izay tsy vitan'ny hoe mora ho an'ny olom-pirenena, fa nampihena koa ny tsindry amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina eny ifotony. Amin'ny maha-teboka manandanja ho an'ny "tambajotra iray hisokatra" sy "fitantanana iray mitambatra tambajotra", ity fampiharana haingana ity dia tsy nijanona tamin'ny "fepetra mety", fa nanohy nanitatra ny firafitry ny fampiharana azy, niova ho kaody serivisy azo entina olom-pirenena ao ny sehatry ny fitantanana sy serivisy ho an'ny daholobe.
Tao amin'ny tobim-pitsaboana tsy miankina amin'ny hopitaly atsinanana amin'ny hopitaly Renji, dia nilahatra teo amin'ny varavarankelin'ny fisoratana anarana Ramatoa Li ary hitany fa nivoaka maraina izy ary tsy nitondra ny karatra fiantohany ara-pitsaboana. Gaga izy fa nandefa andraikitra vaovao ny hopitaly hanohanana ny “fanilihana ny fifanakalozana” ny karatra fiantohana ara-pahasalamana, izany hoe ny fampiasana ny telefaona finday mba hangataka taratasy fanamarinana elektronika fiantohana ara-pahasalamana an-tserasera. Aorian'ny fahombiazan'ny fampiharana dia alao scan ny varavarankely miaraka amin'ny kaody QR ary henoy fotsiny ny "di" Miaraka amin'ny feo iray dia vita ny fisoratana anarana momba ny fanendrena fiantohana ara-pitsaboana.
Misaotra ny "Serivisy iray amin'ny tambajotra" nandefa ny "One Thing for Medical Payment", ny "Fampiharana Kaody" sy ny "Voucher Elektronika Fiantohana ara-pahasalamana" dia mifandray, ary ankehitriny ny olom-pirenenan'i Shanghai dia afaka mampiasa ny "Fampiharana Kaody" hampiharana fisoratana anarana amin'ny hopitalim-panjakana manerana ny tanàna. Fitsaboana, fandoavam-bola ary fomba hafa.
Mamaly ireo fepetra takiana manokana "tsy mifandray" amin'ny areti-mifindra, dia hampiakatra ny fanovana ny hopitaly ara-batana ho "hopitaly nomerika marani-tsaina". Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Zhu Fu fa mbola miverimberina hatrany ny sehatry ny hopitaly Xuhuiyun. Amin'ny ho avy, ny serivisy ara-pitsaboana amin'ny Internet dia hanohy hanome fahafaham-po tsara ny filan'ny olona salama, ary hikaroka fiovana lalina kokoa miaraka amin'ireo manampahefana mifehy sy ny sehatra teknolojia.
Miatrika ny Reniranon'i Yangtze River ary miatrika ny firenena iray manontolo, manatsara hatrany ny haavon'ny serivisy
Amin'ny faran'ny taona, misy sombim-baovao mahafaly ny olona: nahavita ny asa isan-taona mialoha ny fandaharam-potoana i Shanghai tamin'ny faran'ny volana oktobra tao amin'ny tetik'asa azo tantanan'ny governemanta monisipaly miisa 26 amin'ny faritra 10 amin'ity taona ity.
Raiso ny dingana teo aloha handrafetana ny lamina, manohiza mifantoka amin'ny fitantanana ny fizotrany, mba hananan'ny vahoaka tombony azo tokoa. Ny tetik'asa azo tanterahina ao amin'ny governemanta monisipaly 26 dia misy: manampy fandriana 7000 ho an'ny be antitra, ary manangana vondrom-piarahamonina vaovao 50 feno ho ivon-toerana fanompoana taloha; Toerana fikarakarana fiarahamonina 200 ho an'ny be antitra, nohavaozina fandriana 2 000 ho an'ny fikarakarana ny fahasembanana ara-pahalalana; vao natsangana ny fisotroan-dronono vonjy maika 11 (120); niampy tobim-pahasalamana marani-tsaina 100, sns. Ao ambadik'ity andiany isa ity ny hetahetan'ny olona sy ny fiandrasana fiainana avo lenta kokoa.
Miorina ao Qingpu, manompo ny Delta renirano Yangtze, ary miatrika ny firenena manontolo, tamin'ny 24 Oktobra, nampiharina ny hopitaly Yangtze River Delta (Shanghai). Miankina amin'ny fanohanan'ny hopitaly Zhongshan mifandraika amin'ny Fudan University izy io ary mifototra amin'ny fananganana hopitaly Zhujiajiao People ao amin'ny Distrikan'i Qingpu hanambatra loharanom-pahasalamana manara-penitra any amin'ny faritry ny Yangtze River Delta. , Mba hanatsarana ny sehatry ny serivisy any amin'ny faritry ny fampiroboroboana ny varotra ete-Green Delta Eco-Green, ary hanohy hitarika ny famolavolana fanafody marani-tsaina, lozisialy ara-pitsaboana, fiantohana ara-barotra ary fizahan-tany ara-pitsaboana ao amin'ny Zone Demonstration Yangtze Delta.
Ny hopitaly Yangtze River Delta (Shanghai) Internet dia nahavita ny dingana voalohany amin'ny fananganana, ary misy ny drafitra ho an'ny dingana faharoa amin'ny fananganana. Wu Jinglei, talen'ny Vaomieran'ny fahasalamana monisipaly ao Shanghai, rehefa niresaka momba ny fahitana maharitra amin'ny hopitaly Internet Yangtze River Delta, dia nilaza manokana fa nanantena izy fa ity hopitaly ity, izay nateraka niaraka tamin'ny singa Internet, dia hifantoka amin'ny traikefa amin'ny marary, hifikitra. manan-danja amin'ny fifandraisana, ary miasa mafy amin'ity sehatra andrana amin'ny fanavaozana ny haitao fitsaboana ity. "Mihainoa hatrany amin'ny traikefa ara-pahasalaman'ny besinimaro, ary manatsara hatrany ny maodelin'ny serivisy, mba ho tonga toerana fampisehoana dokotera maranitra ao amin'ny Yangtze River Delta, firenena iray manontolo ary na dia any Azia aza, mitarika ny fampandrosoana ho avy."
Aza adino ny toe-javatra ankapobeny, manompoa ny toe-javatra ankapobeny, ary manokatra lalao vaovao, antenaina ny ho avy. Tamin'ity volana ity, amin'ny maha iray amin'ireo tetik'asa lehibe an'ny "Healthy Shanghai Action (2019-2030)", dia vita ny drafi-pananganana rafitra fanombanana ny fahasalamana voalohany eto amin'ny firenena, izay hanombatombanana ara-rafitra ny fiantraikan'ny drafitra fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy lehibe, politika , ary tetik'asa injeniera momba ny fahasalamam-bahoaka. fitaomana. “Tafiditra ao anaty paikady rehetra ny fahasalamana”, manohy mihetsika sy miasa i Shanghai mba hiarovana tsara ny fahasalaman'ny olona.